Psa 132 | Mal1865 | STEP | Fihirana fiakarana . Jehovah ô, tsarovy Davida Noho ny fiahiany rehetra,
Vavaka ho an'ny tranon'Andriamanitra sy ny ankohonan'i Davida
1 Fihirana fiakarana ▼
▼ Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Jehovah ô, tsarovy Davida Noho ny fiahiany rehetra, 2 Dia ilay nianiana tamin'i Jehovah Sy nivoady tamin'ny Maherin'i Jakoba hoe: 3 Tsy mba hiditra ao an-daiko aho, Na hiakatra amin'ny farafara fandriako, 4 Tsy mba havelako hatory ny masoko, Na ho rendrehana ny hodimasoko, 5 Mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah. Dia fonenana ho an'ny Maherin'i Jakoba.
6 Indro, nandre azy tany Efrata isika; Nahita azy tao amin'ny saha anaty ala ▼
▼ Na: tany an-tsahan'i Jara
isika. 7 Aoka hiditra any amin'ny fonenany isika Ka hivavaka eo amin'ny fitoeran-tongony. 8 Mitsangàna, Jehovah ô, ho amin'ny fitsaharanao, Dia Hianao sy ny fiaran'ny herinao. 9 Aoka ny mpisoronao hirafy fahamarinana Ary aoka ny olonao masina hihoby. 10 Noho ny amin'i Davida mpanomponao Dia aza mampiala maina ny tavan'ny voahosotrao.
11 Jehovah efa nianiana tamin'i Davida, Ary marina izany ka tsy hitsoahany Ny ateraky ny kibonao no hapetrako eo ambonin'ny seza fiandriananao. 12 Raha hotandreman'ny zanakao ny fanekeko Sy ny teny vavolombeloko izay hampianariko azy, Dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriananao mandrakizay doria kosa ny zanany.
13 Fa Jehovah efa nifidy an'i Ziona. Ary naniry azy ho fonenany. 14 Ity, hoy Izy, no fitsaharako mandrakizay doria; Eto no honenako, fa efa niriko ity. 15 Hotahiko tokoa ny fihinana ao; Hovokisako hanina ny malahelo ao. 16 Ny mpisorona ao dia hampitafiko famonjena; Ary hihoby tokoa ny olo-masina ao. 17 Ao no hampitsimohako tandroka ho an'i Davida Sy hanamboarako jiro ho an'ny voahosotro. 18 Ny fahavalony hampitafiko henatra; Fa eo aminy kosa no hamirapiratra ny satro-boninahiny.